नेपालपाटी विशेष Archives - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
पराजुली पदमुक्त भएपछि अब के हुन्छ ? न्यायापरिषदले उनको कागजपत्र छानविन गरेर पहिला नै गर्नुपर्ने निर्णय ढिला गरेको छ । वास्तविकता के हो ? न्यायाधीशको जन्ममितिको अभिलेख राख्ने न्यायापरिषदले पहिला नै बो...
चितवन । सोमबार सांँझ वरिष्ठ न्यूरो सर्जन बालकृष्ण थापा आउंँछन् र शल्यक्रिया गर्छन् भन्ने पर्खाइमा एक बिरामी कुरिरहेका थिए । बिहीबार भरतपुरको एलाइभ अस्पतालमा भर्ना भएका पर्वतका ६५ वर्षीय पीताम्बर सापको...
झगडीयाले चलाएको देश
राष्ट्रपतिदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासम्म अदालतमा तारिख धाउदै काठमाडौं । वादी प्रतिवादीका रुपमा अदालतमा मुद्दा खेप्नेलाई कानुनी भाषमा झगडीया भनिन्छ । दाजुभाई, बुबाछोराबीच अंशबण्डाका विषयमा मुद्द...
यसरी भयो त्रिभुवन विमानस्थलमा विमान दुर्घटना, ४९ को मृत्यु
बंगलादेशको राजधानी ढाकाबाट ६७ यात्रु र चालकदलका ४ सदस्यसहित काठमाडौं आएको यूएस बंगलादेश एयरलाइन्सको विमान अवतरणका क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सोमबार दुर्घटनाग्रस्त हुँदा ४९ को मृत्य...
हार्ने निश्चित हुँदा कांग्रेसबाट जनजाती महिला उम्मेदवार
काठमाडौँ । आगामी पाँच वर्षका राष्ट्रपति निर्वाचत हुन वाम गठबन्धनको तर्फबाट वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट लक्ष्मी राईले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । राष्ट्रपति निर्...
‘पार्टीभित्र माधवकुमार नेपालले थिचोमिचो कायम गर्नु भएको छ । पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन नदिने र बाहिर मात्रै लोकतन्त्रको कुरा गरेर केही अर्थ हुन्न ।’ पार्टी महाधिवेसनको पूर्व सन्ध्यामा ४ बर्षअ...
प्रकाशमानका लागि सुनौलो मौका
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको नेतामा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा दुई तिहाई मतले निर्वाचित भएका छन् । सर्वसम्मतिको प्रयास असफल भएपछि दलको नेताका लागि काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा मतदान भए...
झलनाथ खनाल राष्ट्रपति बन्ने उच्च सम्भावना
काठमाडौँ । आगामी फागुन २९ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । वाम गठबन्धनको सहमति अनुसार नयाँ राष्ट्रपति एमालेबाट र उपराष्ट्रपति नेकपा माओवादी केन्द्बाट हुनेछन् । राष्ट्रपतिमा एमालेबाट वर्तमान राष्ट्रप...
काठमाडौँ । ‘योगेशलाई तपाई जिताएर पठाउनुहोस, म मन्त्री बिल्ला भिराएर फर्काउँछु ।’ चुनावी सभाका क्रममा कात्तिक १९ गते ताप्लेजुङको सदरमुकामस्थित तक्मेबजारमा सभालाई सम्वोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ...
पूर्वसहयात्री विप्लवलाई किन पक्राउ गर्दैछन् बादल ?
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने भएको छ । उनलाई पक्राउ गर्न पूर्जी जारी गरिसकिएको छ । गृह मन्त्रालयको नेतृत्व रामबहादुर थापा बादलले सम्हाल...
डा. खतिवडा अर्थमन्त्री बन्नुका भित्री पाटा
‘आजै सानो आकारको सरकार बन्दैछ । अर्थमन्त्री महासचिव ईश्वर पोखरेल बन्ने पक्का भएको छ’ सोमबार दोस्रो पटक सरकार विस्तार गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका एक नेताले नेपालपार्टीसँग भनेका थिए । त्यस...
ओलीसँग प्रदीप ज्ञवाली रुष्ट, सरकारमा नजाने घोषणा
काठमाडौँ । एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यशैलीप्रति सचिव प्रदीप ज्ञवाली रुष्ट बनेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा अर्थमन्त्रालयको आश्वासन दिएको तर डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री ...
कांग्रेसको छाया सरकार, गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री, हारेकालाई जिम्मेवारी नदिने
मन्त्री बनाउदा सांसद भएकाले नै बनाइनेछ । सांसद भएका व्यक्ति मन्त्री हुँदा संसदमा कुरा राख्न सजिलो हुने भएकाले सांसदलाई नै छाया सरकारको मन्त्री बनाउन खोजेको छ । काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकारल...
उपेन्द्र यादव पनि सरकारमा जाने
काठमाडौँ । संघीय समाजवादी फोरम पनि सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । संविधान संशोधनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सकारात्मक देखिएपछि फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा जान सहमत भएका हुन् । आवश्यकत...
देउवालाई चेतावनी, गुनासा र सुझावसहित पौडेलको पत्र
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले लिखित विचार प्रस्तुत गरेका छन् । उनले सभापति शेरबहादुर देउवालाई चेतावनी मात्रै दिएका छैनन, आफ्ना गुनासा र सुझाव ...
पहिलेजस्तै आक्रामक बने लालबाबु
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री लालबाबु पण्डित आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । सामान्य प्रशासनमन्त्री हुँदा डिभी, पीआरधारी सरकारी कर्मचारीलाई कारवाही गरेर चर्चित बनेका लालबाबुले दोस्रो पट...
मन्त्रालय टुंगियो, मन्त्री किन टुंगिएनन् ?
मन्त्रीको विषयमा एमाले र माओवादीमा किचलो काठमाडौँ । स्थिर सरकारमार्फत देशलाई समृद्ध बनाउने नाराका साथ चुनावी तालमेल गरे निर्वाचनमा होमिएका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले झण्डै दु...
विचारमा पोख्त घनश्याम भुसाल र संगठनमा पोख्त योगेश भट्टराई कार्यदलमा परेनन् । भुसाल एमाले उपमहासचिव हुन् भने भट्टराई सचिव हुन् । काठमाडौँ । प्रारम्भिक सात आधार तयार गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी क...
काठमाडौँ । जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री लालबाबु पण्डितले पूर्वजानकारी विनै मन्त्रीको सपथ लिन बोलाइएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त र सपथको विषयमा थाहा भएपनि आफु मन्त्री बन्ने बारे जानकारी नभएको ...
नेपाली कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु भएको छ । चुनावमा लज्जास्पद हार व्यहोरेपछि चौतर्फी आलोचना खेपिरहेका देउवा आफै संसदीय दलको नेता बन्ने प्रयासमा लागेपछि उनी विरुद्ध मोर्च...